Iindaba-Inkqubela phambili yoPhando yokuSebenza kweAntiwear yeLubricant
Kwiminyaka yakutshanje, abaphandi bafumanise ukuba amasuntswana e-nano njengezongezo zokuthambisa angaziphucula iipropathi zokuthambisa, ukufudumeza ubushushu obuphantsi kunye neempawu zokuthambisa zokuthambisa. Into ebalulekileyo kukuba ioyile yokuthambisa yongezwe ngamasuntswana e-nano ayiselulo unyango olulula lokuthambisa kweoyile kwinkqubo yokuthambisa, kodwa kukuphucula ukusebenza kwe-lubrication ngokutshintsha imeko yokungqubana phakathi kwezibini zoxinzelelo phakathi kwembambano inkqubo. Ukuphuhliswa kwezongezelelo kunentsingiselo ebalulekileyo. Kwizongezelelo eziqinileyo, ubume obunqamlezileyo ngokungathandabuzekiyo bobona bume busengqiqweni, obunokuthi luqonde inguquko ukusuka kukruthakruthwano olwehlayo luye kwi-friction ye-rolling, ngalo ndlela kuncitshiswe ukungqubana kunye nokunxiba komphezulu ukuya kuthi ga ngoku. Ngokwendlela yokuthambisa eyahlukeneyo yokuthambisa izongezo zeoyile, eli nqaku liphonononge ikakhulu iindlela zokulungiselela amasuntswana e-spherical micro-nano kule minyaka idlulileyo kunye nokusetyenziswa kwazo njengezithambisi zeoyile, kunye nokushwankathela ezona zinto ziphambili zokulwa nokunxiba.
Indlela yokulungiselela ye-spherical micro-nano particle additive
Zininzi iindlela zokulungiselela isongezo esincinci se-nano-nano. Iindlela zesiko zibandakanya indlela yokubilisa amanzi, indlela yemvula etshisayo, indlela ye-sol-gel, kunye nendlela evelayo ye-laser irradiation kule minyaka idlulileyo. Amasuntswana aveliswa ziindlela ezahlukeneyo zokulungiselela anezakhiwo ezahlukeneyo, ukwenziwa kunye neepropathi, ke iipropathi zokuthambisa ziboniswe njengezongezo zokuthambisa nazo zahlukile
Indlela ye-hydrothermal yindlela yokwenza izinto ezingaphantsi kwe-micron ngokufudumeza kunye nokucinezela inkqubo yokuphendula kwisitya esithile soxinzelelo esivaliweyo kunye nesisombululo samanzi njengendawo yokuphendula, kunye nokwenza ukusabela kwe-hydrothermal kubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu. Indlela ye-hydrothermal isetyenziswa ngokubanzi ngenxa yomgubo ocolekileyo wokwenziwa kunye ne-morphology elawulwayo. Xie okqhubekayo. Usebenzise indlela ye-hydrothermal synthesis ukuguqula ngempumelelo i-Zn + ibe yi-Zn0 kwindawo enealkali.Uvavanyo luye lwabonisa ukuba ukongeza i-organic additive triethanolamine (TEA) kunye nokuhlengahlengisa uxinzelelo kunokulawula i-morphology yamasuntswana e-zinc oxide, ayenze ukusuka kwi-ellipse ecekeceke. Ubume obujikelezayo buba yimilo engqukuva. I-SEM ibonisa ukuba amasuntswana e-Zn asasazeka ngokufanayo, enobungakanani be-particle emalunga ne-400m. Indlela ye-hydrothermal kulula ukwazisa ukungcola okunje ngezongezo ngexesha lenkqubo yokuhlanganisa, eyenza imveliso ingacoceki kwaye ifuna ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lendawo, exhomekeke kakhulu kwizixhobo zemveliso.
Ukulungiswa kwamasuntswana e-spherical micro-nano kunye neendlela zawo zokuthambisa njengezongezo zokuthambisa. , Inkqubo yokuqala yokuthambisa yokuthambisa ngokudibanisa amasuntswana amancinci kukutshintsha ukutyibilika kwesliding kukuqengqeleka, okusisiphumo sokuthwala okuncinci, okunciphisa ngempumelelo ukungqubana kunye nokunxiba.